Puntland oo ku fashilantay heshiis ay ka qarisay DF (SABABTA)
Home » WARARKA MAANTA » Puntland oo ku fashilantay heshiis ay ka qarisay DF (SABABTA)	Puntland oo ku fashilantay heshiis ay ka qarisay DF (SABABTA)
20/03/2017	1,544 Views Maamulka Puntland ayaa ku fashilmay isku-day aysan ka war hayn dowladda Soomaaliya, kaas oo ay caawinaad uga dalbatay NATO; balse ay NATO ku soo warcelisayay hadal quus wata.
Hadalkaasi ayaa soo baxay ka dib markii uu madaxweyne-ku-xigeenka Puntland Eng. Cabdixakiim Cabdullaahi Cameey ka codsaday ciiddanka caalamiga ee ilaalada ka haya xeebaha Soomaaliya in ay tallaabo ka qaadaan kalluumeysiga sharci-darradda ee badda Soomaaliya.
Mudane- Cammeey ayaa hadalkan sheegay mar uu ka hadlayey munaasabad shalay ka dhacday dekedda Bosaaso oo lagu soo bandhigay markabkii dhawaan laga soo daayay gacanta koox Soomaali ah oo afduub ku heystay.
Afduubka ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee markab loogu geysta xeebha Soomaaliya tan iyo markii lagu dhawaaqay in ay joogsadeen falalka burcad-badeednimada, sannadkii 2012.
Eng. Cammeey ayaa ka digay in ay dhici karaan afduubyo kale, haddii aan laga hortegin dhibaatadda ka taagan badda Soomaaliya.
“Waxa aan ka codsanay maraakiibta dagaalka ee Isbahaysiga NATO in ay tallaabo ka qaadaan maraakiibta sida sharci-darradda ah uga kalluumeysta badda Soomaaliya” ayaa uu yiri.
Waxa uu intaas ku daray in ay Saraakiisha NATO u muujiyeen in aysan howlaha loo idmaday ka mid ahayn in ay ka hortagaan maraakiibta kalluumeysiga; balse ay hawshooda tahay la-dagaaalanka burcad-baddeeda.
Previous: Ra’iisul-wasaare Kheyre oo la filayo in uu maanta ku dhawaaqo xukuumadda cusub
Next: FIIRSO: Baarlamaanka Jubbaland iyo baarlamanka magaalada Nairobi oo la mataaneeyay